Umthetho Wezokuphatha | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Umthetho wokuphatha umayelana namalungelo nezibopho zezakhamizi nezamabhizinisi kuhulumeni. Kepha umthetho wokuphatha uphinde ulawule ukuthi uhulumeni uthatha kanjani izinqumo nokuthi yini ongayenza uma ungavumelani nesinqumo esinjalo. Izinqumo zikahulumeni zigxile emthethweni wezokuphatha. Lezi zinqumo zingaba nemiphumela efinyelela kude kuwe. Yingakho kubalulekile ukuthi uthathe izinyathelo ngokushesha uma ungavumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela ethile kuwe…
BUKA KUMNYAMA WEMITHETHO EYODLULA
Umthetho wokuphatha umayelana namalungelo nezibopho zezakhamizi nezamabhizinisi kuhulumeni. Kepha umthetho wokuphatha uphinde ulawule ukuthi uhulumeni uthatha kanjani izinqumo nokuthi yini ongayenza uma ungavumelani nesinqumo esinjalo. Izinqumo zikahulumeni zigxile emthethweni wezokuphatha. Lezi zinqumo zingaba nemiphumela efinyelela kude kuwe. Yingakho kubalulekile ukuthi uthathe izinyathelo ngokushesha uma ungavumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela ethile kuwe. Isibonelo: iphemithi yakho izophucwa noma uzothathelwa izinyathelo zokuqinisa umthetho. Lezi yizimo ongaphikisana nazo. Vele kukhona amathuba okuthi ukuphikisa kwakho kuzokwaliwa. Unelungelo futhi lokufaka umthetho wokuphikisa kanye nokuphikisana nokwenqatshwa kwakho. Lokhu kungenziwa ngokuthumela isaziso sokubuyekeza. Abameli bezokuphatha be Law & More ingakweluleka futhi ikusekele kule nqubo.
> Umthetho Ojwayelekile Wokulawula
> Ukuqondisa kokuphatha
> Isikweletu sikahulumeni
> Izihloko emthethweni wokuphatha
Umthetho Ojwayelekile Wokulawula
UMthetho Jikelele Wokulawula Okubanzi (i-Awb) uvame ukwakha uhlaka lwezomthetho kumacala amaningi wezokuphatha. Umthetho obizwa ngeGeneral Administrative Law Act (Awb) ubeka phansi ukuthi uhulumeni kumele azilungiselele kanjani izinqumo, ashicilele inqubomgomo nokuthi iziphi unswinyo ezitholakalayo zokusebenzisa umthetho.
Ungaxhumana nomthetho wokuphatha uma udinga imvume. Lokhu kungaba, ngokwesibonelo, imvume yemvelo noma imvume yotshwala nezokuvakasha. Ngokwezifiso, kwenzeka njalo ukuthi izicelo zezimvume zenqatshelwe ngokungafanele. Izakhamizi zingaphikisa. Lezi zinqumo ngezimvume izinqumo ezingokomthetho. Lapho uthatha izinqumo, uhulumeni uboshwa yimithetho ehlobene nokuqukethwe nendlela izinqumo ezenziwa ngayo. Kuwukuhlakanipha ukuba nosizo lwezomthetho uma wenqaba ukwenqaba isicelo sakho semvume. Ngoba le mithetho idalwa ngesisekelo semithetho yezomthetho esebenza emthethweni wokuphatha. Ngokuzibandakanya nommeli, ungaqiniseka ukuthi inqubo ezoqhubeka ngendlela efanelekile uma kwenzeka ukuphikiswa futhi kwenzeka isikhalazo.
Kwezinye izimo akunakwenzeka ukufaka ukuphikisa. Kwezinqubo kungenzeka ukuthi ulethe umbono ngemuva kwesinqumo esiyilwayo. Umbono ukusabela wena, njengeqembu elinentshisekelo, ongawuthumela kwigunya elinekhono ukuphendula isinqumo sokusalungiswa. Isiphathimandla singabheka imibono evezwe lapho isinqumo sokugcina sizothathwa. Ngakho-ke, kuwukuhlakanipha ukufuna izeluleko zomthetho ngaphambi kokuhambisa umbono wakho maqondana nesinqumo esiyilwayo.
Ukuxhaswa ngoxhaso kusho ukuthi unelungelo lokuthola izinsizakusebenza zezezimali ezivela kugatsha lezokuphatha ngenhloso yokuxhasa imisebenzi ethile. Ukunikezwa koxhaso kuhlale kunesisekelo esingokomthetho. Ngaphezu kokubeka imithetho, uxhaso luyithuluzi esetshenziswa ohulumeni. Ngale ndlela, uhulumeni uvusa ukusebenza okufanelekile. Uxhaso luvame ukufakwa ngaphansi kwemibandela. Lezi zimo zingahlolwa nguhulumeni ukubona ukuthi ziyafezeka yini.
Izinhlangano eziningi zincike kumxhaso. Kodwa lapho kwenziwa njalo kuyenzeka ukuthi uxhaso lukhishwe nguhulumeni. Ungacabanga ngesimo uhulumeni asinciphayo. Ukuvikelwa kwezomthetho kuyatholakala nangesinqumo sokuchithwa. Ngokuphikisana nokuhoxiswa koxhaso, kwezinye izikhathi, ungaqinisekisa ukuthi ilungelo lakho kuxhaso luyagcinwa. Ngabe uyangabaza uma uxhaso lwakho luhoxisiwe ngokusemthethweni noma uneminye imibuzo ngoxhaso lukahulumeni? Bese uzizwe ukhululekile ukuxhumana nabameli bokuphatha be Law & More. Sizokujabulela ukululeka ngemibuzo yakho maqondana noxhaso lukahulumeni.
Kungase kudingeke ukuthi ubhekane nohulumeni lapho kwephulwa imithetho endaweni yangakini futhi uhulumeni ekucela ukuthi ungenelele noma lapho, ngokwesibonelo, uhulumeni eza ngokubheka ukuthi uyayihambisana yini nemibandela yezimvume noma ezinye izimo ezibekiwe. Lokhu kubizwa ngokuthi kusetshenziswa uhulumeni. Uhulumeni angathumela abaqondisi kule nhloso. Abaphathi bayakwazi ukufinyelela kuyo yonke inkampani futhi bavunyelwe ukucela lonke ulwazi oludingekayo futhi bahlole futhi baphathe abaphathi nabo. Lokhu akudingi ukuthi kube nokusola okukhulu ukuthi imithetho yephuliwe. Uma ungabambisani ecaleni elinjalo, uzojeziswa.
Uma uhulumeni ethi kube nokwephula umthetho, uzonikezwa ithuba lokuphendula kunoma yikuphi ukuphoqa okuhlosiwe. Lokhu kungaba, ngokwesibonelo, umyalo ngaphansi kwenkokhelo yenhlawulo, umyalo ngaphansi kwenhlawulo yokuphatha noma inhlawulo yokuphatha. Izimvume nazo zingahoxiswa ngezinhloso zokuphoqelelwa.
Umyalo ongaphansi kokukhokhiswa kwenhlawulo kusho ukuthi uhulumeni ufuna ukukukhuthaza ukuthi wenze noma wenqabe ukwenza isenzo esithile, lapho uzokweleta isamba semali uma ungabambisani. I-oda ngaphansi kwenhlawulo yokuphatha idlula lapho. Ngomyalo wokuphatha, uhulumeni uyangenelela futhi nezindleko zokungenelela zibangwa kuwe kusuka kuwe. Lokhu kungaba njalo, ngokwesibonelo, uma kukhulunywa ngokubhidliza isakhiwo esingekho emthethweni, ukuhlanza imiphumela yokwephulwa kwemvelo noma ukuvala ibhizinisi ngaphandle kwemvume.
Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo uhulumeni angaqoka ukukhokhisa inhlawulo ngomthetho wokuphatha esikhundleni somthetho wobugebengu. Isibonelo salokhu inhlawulo yokuphatha. Inhlawulo yokuphatha ingaba phezulu kakhulu. Uma ukhishwe inhlawulo yokuphatha futhi ungavumelani nakho, ungafaka isimangalo ezinkantolo.
Ngenxa yecala elithile, uhulumeni anganquma ukubuyisa imvume yakho. Lesi silinganiso singasetshenziswa njengesijeziso, kepha futhi njengokuphoqelela ukuvimbela isenzo esithile ukuthi siphindwa.
Kwesinye isikhathi izinqumo noma izenzo zikahulumeni zingadala ukulimala. Kwezinye izimo, uhulumeni unesibopho sawo lo monakalo futhi ungacela izindleko zomonakalo. Kunezindlela eziningi lapho wena, njengosomabhizinisi noma umuntu ozimele, ongacela khona ukulimala okuvela kuhulumeni.
Isenzo esingekho emthethweni sikahulumeni
Uma uhulumeni enze ngokungemthetho, ungabopha uhulumeni icala kunoma yimuphi umonakalo owuphethe. Empeleni, lokhu kubizwa ngokuthi isenzo sikahulumeni esingekho emthethweni. Lokhu kunjalo, ngokwesibonelo, uma uhulumeni evala inkampani yakho, bese ijaji ngemuva kwalokho linquma ukuthi lokhu bekungavunyelwe ukwenzeka. Njengosomabhizinisi, ungafuna imali elahlekelwe ngenxa yokuvalwa kwesikhashana nguhulumeni.
Isenzo sikahulumeni esisemthethweni
Kwezinye izimo, ungahlupheka futhi uma uhulumeni enze isinqumo esisemthethweni. Lokhu kungenzeka, ngokwesibonelo, lapho uhulumeni enza ushintsho ezinhlelweni zokubekwa komhlaba, ezizokwenza amaphrojekthi athile wokwakha abe khona. Lolu shintsho lungaholela ekulahlekelweni kwemali engenayo evela ebhizinisini lakho noma ukwehliswa kwenani lekhaya lakho. Esimweni esinjalo, sikhuluma ngenxephezelo ngomonakalo wecebo noma isinxephezelo sokulahlekelwa.
Abameli bethu bezokuphatha bazokujabulela ukululeka ngamathuba okuthola isinxephezelo ngenxa yesenzo sikahulumeni.
Isikhalazo kanye nesikhalazo
Ngaphambi kokuphikisana nesinqumo sikahulumeni singafakwa enkantolo yezokuphatha, inqubo yokuphikisa kufanele iqale iqhutshwe. Lokhu kusho ukuthi kufanele ukhombise ngokubhala kungakapheli amasonto ayisithupha ukuthi awuvumelani nesinqumo kanye nezizathu zokuthi kungani ungavumi. Izikhalazo kumele zenziwe ngendlela ebhaliwe. Ukusetshenziswa kwe-imeyili kungenzeka kuphela uma uhulumeni ekucacisile lokhu ngokucacile. Isiphikiso ngocingo asithathwa njengesiphikiso esisemthethweni.
Ngemuva kokuthi kufakwe isaziso sokuphikisa, uvame ukunikezwa ithuba lokuchaza ukuphikisa kwakho ngamazwi. Uma ufakazelwe ulungile futhi ukuphikisa kumenyezelwe ukuthi kunesisekelo esihle, isinqumo esiphikisanayo sizobuyela emuva bese esinye isinqumo sizosifaka esikhundleni saso. Uma ungavezwanga ulungile, ukuphikisa kuzokhulunyelwa ngokuthi awunasisekelo.
Ukudluliswa kwesikhalo mayelana nesinqumo senkambiso kungafakwa enkantolo. Isikhalazo kufanele futhi sithunyelwe ngokubhala kungakapheli amasonto ayisithupha. Kwezinye izimo futhi kungenziwa ngedijithali. Ngemuva kwalokho inkantolo idlulisa isaziso sokudluliswa kwecala ku-ejensi kahulumeni ngesicelo sokuthumela yonke imibhalo ephathelene necala futhi bayiphendule esitatimendeni sokuzivikela.
Ukulalelwa kwecala kuzolandelwa ngokulandelayo. Inkantolo iyobe isinquma kuphela ngesinqumo esiphikisiwe sokuphikisana. Ngakho-ke, uma ijaji livumelana nawe, uzokhipha kuphela isinqumo ngesinqumo sakho. Inqubo-ke ayikapheli okwamanje. Uhulumeni kuzofanela anikeze isinqumo esisha ngalokho okuphikisayo.
Izihloko emthethweni wokuphatha
Ngemuva kwesinqumo esenziwe nguhulumeni, unamasonto ayisithupha ukufaka isikhalazo noma isikhalazo. Uma ungaphiki ngesikhathi, ithuba lakho lokwenza okuthile okuphikisana nesinqumo lizodlula. Uma kungenakuphikiswa noma kudluliswa isikhalazo maqondana nesinqumo, uzonikezwa amandla asemthethweni. Kube sekucatshangwa ukuthi kungokomthetho, zombili ngokuya ngendalo nokuqukethwe kwayo. Isikhathi esilinganiselwe sokufaka isikhalazo noma isikhalazo empeleni singamaviki ayisithupha. Ngakho-ke kufanele uqinisekise ukuthi wenza usizo lwezomthetho ngesikhathi. Uma ungavumelani nesinqumo, kufanele ulethe isaziso sokuphikisa noma sokudluliswa kwesicelo kungakapheli amasonto ayi-6. Abameli bezokuphatha Law & More ngingakweluleka ngale nqubo.
Singakumela wena kuzo zonke izindawo zomthetho wokuphatha. Cabanga, ngokwesibonelo, ukuhambisa isaziso sokuphikisana nesiphathimandla sikaMasipala ngokumelene nokufakwa komyalelo onikezwe ekukhokheni inhlawulo noma icala enkantolo phambi kokwehluleka ukunikeza imvume yezemvelo yokuguqulwa kwesakhiwo. Umkhuba wokululeka uyingxenye ebalulekile yomsebenzi wethu. Ezimweni eziningi, ngeseluleko esifanele, ungavimba izinqubo ezibhekene nohulumeni.
Phakathi kokunye, singakweluleka futhi sikusize:
• Ukufaka izicelo zoxhaso;
• inzuzo ebimisiwe kanye nokuhlelwa kabusha kwale nzuzo;
• ukubekwa kwenhlawulo yokuphatha;
Ukwenqatshelwa kwesicelo sakho semvume yezemvelo;
• ukufaka ukuphikisana nokuchithwa kwezimvume.
Ukuqhubeka komthetho wezokuphatha kuvame ukuba ngumsebenzi wommeli wangempela, yize usizo lommeli wezomthetho lungaphoqelekile. Ingabe awuvumelani nesinqumo sikahulumeni esinemiphumela efinyelela kude kuwe? Bese uthinte abameli bezokuphatha be- Law & More ngqo. Singakusiza!